200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 KASHIFAAD: Habeenkii Sir Alex Ferguson Uu La Dagaalay Boliiska Turkiga Iyo Wixii Dhacay 23 Sanno Ka Hor Oo Daaha Laga Qaaday | UfeynNews.com
KASHIFAAD: Habeenkii Sir Alex Ferguson Uu La Dagaalay Boliiska Turkiga Iyo Wixii Dhacay 23 Sanno Ka Hor Oo Daaha Laga Qaaday
Tababarihii Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa la dagaalay boliiska dalka Turkiga ee garoonka ilaalinayey intii lagu jiray dagaal ka dhacay tanalka garoonka sannadkii 1993dii, sida laga soo xigtay kabtankii waqtigaas ee Man United Steve Bruce.
Kooxda Turkiga ka dhisan ee Galatasaray ayaa Manchester United kasoo reebtay tartanka UEFA Champions League kulan uu dagaal iyo isqabqabsi ciyaartoyda ah hareeyey, waxaana ciyaartoyda labada kooxood isku qabsadeen jidka loo maro qolka lebiska ama tanalka, boliiska Istanbul ayaana isku deyey inay xaaladda dejiyaan.
Gooldhaliyihii Man United Eric Cantona ayaa casaan la siiyey ciyaartaas sababtoo ah ninka Faransiiska u dhashay ayaa aflagaado u geystay mid ka mid boliiska markii ay tanalka kasii degayeen, taasna waxay keentay inay si caro leh falceliyaan ciyaartoyda Red Devils.
Tababaraha haatan ee kooxda Hull City Steve Bruce ayaana daaha ka qaaday doorkii uu halyeeyga Man United Ferguson ku lahaa dagaalkaas isagoo wareysi gaar ah siiyey majaladda Daily Mail, shabakadda Manchester Evening News ayaana soo xigatay qeyb ka mid ah hadalkiisa.
Ciyaartoyda Galatasaray oo doonaya inay dagaal la galaan Contana
Dhammaanteen sidii aan u aheyn ciyaartoyda Manchester United waqtigaas waa nalaga eexday. Bryan Robson, oo ahaa kabtankii xulka England, ayaa halkaas joogay. Bryan wuxuu ahaa shaqsi degan. Laakiin waqtigaas waxaa u xirnaa feer wuxuuna diyaar u ahaa inuu shaqsi garaafeeyo. Diyaar uma aheyn in dhibaato loo geysto. Meel kasta oo qolka lebiska ah dhiig ayaa daadsanaa. Bryan wuu qeylinaayey, nin xoogan oo Turkey ah ayaana u yimid ka dibna kobtiisa ku dhuftay,” ayuu Bruce u sheegay Daily Mail – isagoo ka sheekeynaya dhacdadaan 23ka sanno laga joogo.
“Wixii intaas ka dambeeyey dagaal ayaan isku diyaarinay si aan isku difaacno. Waxaan ka arkay garabkeyga Fergie oo jaranjarada orod uga soo tegaya. Ka dibna wuxuu iska siibay jaakadda. Wuxuu markaas ahaa 50 sanno jir, wuxuuna diyaar u ahaa inuu dagaalka ku biiro. Ugu dambeyntii qolka lebiska ayaan tagnay.
Contana oo garoonka uu boliis ka saarayo ka dib markii uu casaan qaatay ciyaartaas
Fergie wuxuu inoogu khudbeeyey qolka lebiska. Gabi ahaanba tintiisa midba meel ayey u jeeday, taaygiisu wuxuu ku laabnaa dhegta akteeda wuxuuna nagu yiri ‘Midkiina ma uusan dagaalamin maxaad u dagaalami weyseen?
“Dagaalka gala oo isdifaaca, haddii aad aniga fasax iga sugeyseen waad hesheen. Ma jiro tababare doonaya inuu adduunka u sheego inuu arkayey ciyaartoydiisa oo tanalka lagu weerarayo. Waxaan xusuustaa inuu albaabka ka dambeeya xirnaa habeenkaas…. Inta dhammaanteen isfiirinay ayaan waxaan isku dhahnay ‘Fergie caawa dagaal ayuu geli doonaa’. Habeenkaas isbiirid ayuu abuuray.”
Ferguson ayaa markaas wixii ka dambeeyey wuxuu ku hanjabay in uusan dib ugu laaban doonin caasimadda Istanbul, si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa markale ku aaday Galatasaray wareeggii koowaad ee tartanka Champions League sannadkii 1994tii, markaas ma uusan dhicin dagaal kale.